‘नेप्से वाच’ न्यूज लेटरको आठौं संस्करण प्रकाशित – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:५४ Basanta Khanal	0 Comments	share bajar
काठमाडौं : सेयर बजारको प्राविधिक र आधारभूत विश्लेषणसहित साताभरको महत्वपूर्ण गतिविधि समेटिएको ‘नेप्से वाच’ न्यूज लेटरको आठौं संस्करण प्रकाशित भएको छ । आठौं संस्करणसम्म आइपुग्दा यसमा थुप्रै सुधार र परिमार्जनहरु पनि गरिएका छन् । यो अंकलाई अझै विशेष अंक बनाउने प्रयास गरिएको छ । विगतका अंकहरु भन्दा यो फरक छ । किन भने यसमा विगतदेखि अहिलेसम्म लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षक लाभांश दिंदै आएका कम्पनीहरुको चित्रण गरिएको । वित्तीयरुपमा सबल दक्ष सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन पक्ष राम्रो भएका अनि लगातार लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो लाभांश दिने १३ कम्पनीका बारेमा यस अंकमा जानकारी गराइएको छ । यसआधारमा यो अंकले आम पाठकहरुका लागि अझै विशेष हुने र यसबाट हाम्रा पाठक तथा लगानीकर्ताहरुले थप लाभ लिन सक्नु हुने अपेक्षा गरिएको छ । यी कम्पनीहरुको पछिल्लो बजार मूल्य औसत लाभांश क्षमतासहित थुप्रै महत्वपूर्ण सूचकहरुका आधारमा अध्ययन गरिएको छ । यसबाहेक न्यूज लेटरमा यसअघिका प्रायः सबै नियमित स्तम्भहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस न्यूज लेटरले सेयर बजारमा साताभर भएका महवपूर्ण गतिविधिहरुलाई समेटेको छ । साथै आगामी साता बजार के होला ? भन्ने जानका लागि केही महत्वपूर्ण आधारभूत तथा प्राविधिक टुल्सहरुको आधारमा विश्लेषण पनि गरिएको छ । यसैगरी नेप्सेको समग्र ट्रेन्ड विश्लेषण पनि गरिएको छ ।
यसका साथमा नेप्सेको सेक्टरवाइज अवस्था पनि उल्लेख छ । यतिमात्र होइन, देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रको अवस्था कमोडिटी मार्केट, विश्व सेयर बजारको एक भलक पनि यसमा राखिएको छ । यसबाहेक सेयर बजारका अन्य थुप्रै समसामयिक र महत्वपूर्ण सूचकहरु पनि यो अंकमा समेटिएका छन् । यो न्यूज लेटर ‘स्मार्ट वेल्थ प्रो’का प्रयोगकर्ताले निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने छन् । यस्तै, यो न्यूज लेटर केही समयका लागि नेपाली पैसाको प्रडक्ट सेयर म्यानेजर तथा अन्य बेसिक प्रयोगकताहरुले पनि निःशुल्करुपमा पढ्न पाउनेछन् । साप्ताहिकरुपमा यो न्यूज लेटर पढनका लागि स्मार्ट वेल्थ प्रो लग इन गर्दै रहनु होला ।
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – २५ बैशाख २०७८ शनिवारको राशिफल पढौं
नेपालमा कम मूल्यमै पाइने उत्कृष्ट स्मार्टफोन, कुनको मूल्य कति? →
२८ माघ २०७७, बुधबार ११:०६ Basanta Khanal	0